ikhaya » iindaba » I-Media Links idibanisa amaQumrhu kunye nabalingani abatsha kwi-EMEA Region
I-Media Links, i-Technology ne-Engineering Emmy® Award winner kunye nenkokeli yemakethi kwiinkcazo zeendaba zezothutho ze-IP, uye wazisa ukuba sele iqhagamshelanise neqabane elitsha elinesigqeba e-Europe. Ukuza kwebhodi njengenxalenye ye-Media Links Programme yoNxibelelwano eqaliswe kwi-IBC kunyaka ophelileyo yile: I-CCK Media esekelwe eLondon, GTC ePortugal, i-Video Progetti e-Italy, i-Visionetics International eFransi kunye ne-AV Group eBelgium. Abaqabane abatsha baya kuncedisa imizamo ye-Media Links 'iqabane elide laseJamani i-VIDI GmbH, ukukunceda ukukhuthaza, ukuthengisa nokuxhasa iinkqubo zezothutho zeenkampani ze-IP kwi-EMEA.
"Sivuyayo ukuwamkela amaqabane ethu asemagunya atshabileyo ukuba asebenze nathi," uqinisekisa uJohn Smith, umlawuli olawulayo, iMedia Links EMEA. "Kanye nokugubungela ububanzi bendawo, ngosizo lwabo, sinokuzibandakanya ngokusesikweni izisombululo zethu kumacandelo amasha kubandakanya i-telemedicine, urhulumente kunye nemfundo.
"Nangona kunjalo, oku kungokuqala kwezicwangciso zethu zekamva," wongezelela uSmith. "Kwi-IBC kunyaka ophelileyo, saqalisa inkqubo yethu yecalingani ephumelelayo ekhangele umdla omkhulu kwaye kulo nyaka sizimisele ukuqhubeka nokukhula kwaye sidibane nabanye abatsha baqhagamshelana ukuhlola indlela, ngokusebenzisana kunye, sinokwandisa ukufikelela kwethu ngakumbi."
Kwi-IBC 2017 kwi-1.C31, i-Media Links iya kuvula i-MDP 3020 yayo, idivaysi ye-IP yomgca wesango lokusasaza, eyenzelwe ukuveliswa kwemida ekude kunye nokuhanjiswa kwezinto ze-IP, eziza kubakho umdla kubantu abasabalali bezemidlalo.
"Le ncinane encinci idibanisa imfuno yendawo yonke yokuthuthwa kwe-IP ekhuselekileyo yokhuseleko ekhutshwe kakhulu, ngokukhawuleza ukuyisebenzisa, kunye nokulungelelaniswa ukude," uqhubeka uSmith. "I-MDP 3020 isebenzisa imigangatho equka i-2022-6 / 7 kunye ne-TR-01 ukwenza iinkcitho ezikhulayo zolwazi ngeendaba ze-IP, amanxibelelwano asele ekhoyo, kunye neenethwekhi zokunxibelelana kwee-point-to-point zinikezela ngexabiso elifanelekileyo kwaye lilungele isisombululo kwizicelo ezinjengomveliso odeleyo kwi-IP. Sibheke phambili ekuboniseni ubuchule be-MDP 3020 kubo bobabini abathengi kunye namaqabane athile ngokufanayo okokuqala ngethuba. "
Ngolwazi oluthe vetshe nceda ubone: Www.medialinks.com
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli CES2017 I-CK Media esekelwe eLondon GTC ePortugal IP Media Gateway MDP 3020 Media Links Injini yeVidiyo Iprogramti yevidiyo kwiItali I-Visionetics International eFransi kunye ne-AV Group eBelgium	2017-09-12
Previous: UMlawuli woPhuhliso kunye noNxibelelwano
next: Ukuphila kunye neTeknoloji: Ukuphonononga i-Photorealistic Robotics